ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကနေဖန်တီးထားတဲ့ အလန်းစား Vocaloid လေးများ - JAPO Japanese News
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကနေဖန်တီးထားတဲ့ အလန်းစား Vocaloid လေးများ
ဂါ 19 Nov 2019, 15:52 ညနေ
အတိအကျအားဖြင့်ပြောရရင် Vocaloid လေးတွေက 2004ခုနှစ်မှာစတင်ပေါ်ထွက်ထာတာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း Software ကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့တာကတော့2000ခုနှစ်ဝန်းကျင်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။
အခု Father of Vocaloid လို့အမည်တွင်တဲ့ Kenmochi Hideki ကစတင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Research ပရောဂျက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့ရုံသက်သက်ပါ။ Commercially (စီးပွားရေးအရရောင်းချဖို့အတွက်) မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။
ပရောဂျက်တစ်ခုအနေနဲ့ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီ Software က2004ခုနှစ်မှာတော့ Japan Yamaha Corporation က Commercial Productတစ်ခုအနေနဲ့ စတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
Software တစ်ခုကနေသီချင်းစင်းလုံံးချောတစ်ပုဒ် ဘယ်လိုထွက်လာတာပါလိမ့် ??
ရှုပ်ထွေးပြီးနားလည်ရခက်တဲ့ သီချင်းဖန်တီးမှုအဆင့်ဆင့်အများကြီးရှိပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့်ရိုးရိုးလေးပြောရရင်တော့ Software ကတစ်ဆင့်သီချင်းစာသားနဲ့Melodyလေးတွေကို ထည့်သွင်းလိုက်ရုံနဲ့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ Vocaloid Character ရဲ့အသံနဲ့ သီချင်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ။
သီချင်းသီဆိုရာမှာလိုအပ်တဲ့ သံစွဲ၊သံဖြတ်၊အသံတိုး၊အသံချဲ့၊အသံကာလာပြောင်းခြင်း စတာတွေကိုတော့ Softwareဝယ်ယူထားပြီးသီချင်းဖန်တီးနေတဲ့သူက Control လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စတင်ခဲ့တဲ့2004ကစလို့ ကုမ္ပဏီတွေကဒီSoftwareနဲ့သီချင်းတွေဖန်တီးပြီး စီးပွားရေးအရရောင်းချခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်ထိကိုပဲ Vocaloid လောကမှာအအောင်မြင်ခဲ့ဆုံး Company ကတော့ Cryton Future Media,Inc ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Vocaloid ဆိုတာနဲ့လူသိများတဲ့Characterလေးတွေကဒီ Company ရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေမို့လို့ပါပဲ။
Vocaloid လောကရဲ့နာမည်အကြီးဆုံး Character တစ်ချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
Hatsune Miku CV01
Hatsune Miku ကို 2007ခုနှစ် August လ 31 ရက်နေ့မှာ Cryton Future Media ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vocaloid လောကမှာ second generation ဖြစ်တဲ့“Character Voice Series”ရဲ့ပထမဆုံး Character ဖြစ်ပါတယ်။ First Generation ကတော့ သိပ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။
Hatsune Mikuမှာ code number တစ်ခုရှိပြီး CV01 ဖြစ်ပါတယ်၊ Character Voice Series 01ပါ။
Miku ရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ ဂျပန်မှာသာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုပါ Vocaloid Culture ကိုအသိပေးနိုင်တဲ့အထိဟုန်းဟုန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။
Vocaloid အကြောင်းကိုအရင်ကမသိတဲ့သူတွေပါ အာရုံစိုက်မိလာကြပြီး Hatsune Miku software package
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Supercell ရဲ့ ခေါင်းဆောင် Ryo ကိုယ်တိုင်ကလည်း Miku ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးသီချင်းဖြစ်တဲ့“World is Mine”ကို2008ခုနှစ် May လမှာ Produce လုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီသီချင်းလေးကို Mikuရဲ့ Fan တွေက Character Theme Song လို့တောင်သတ်မှတ်‌ပေးခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။​
Youtube Link လေးပေးထားတာမို့လို့ Hatsune Miku အသံလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်မလဲဆိုတာ ဝင်ကြည့်ကြည့် ကြပါနော်။
(Romeo and Cindrella)
Kagamine Len & Kagamine Rin CV02
Hatsune Miku နဲ့အရမ်းအောင်မြင်သွားတဲ့ Cryton Future Media Company ဟာဆိုရင်ဖြင့် 2007ခုနှစ် December လမှာနောက်ထပ် Character Voice Series ရဲ့ ဒုတိယဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ Kagamine Len နဲ့ Kagamine Rin ရဲ့အသံနဲ့ဇာတ်ရုပ်လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Kagamine Len နဲ့ Rin ဟာအမွှာဇာတ်ကောင်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသံနဲ့ ချစ်စဖွယ်ရုပ်ကလေးတွေကြောင့် Hatsune Miku လိုပဲ Vocaloid fan တွေရဲ့အသည်းနှလုံးကို အပြည့်အဝဖမ်းစားနိုင်တဲ့သူတွေပါ။
Len နဲ့ Rinရဲ့ Code Name ကတော့ CV02 ဖြစ်ပြီးတော့ Character Series 02 ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်မှာလည်း Notable ဖြစ်တဲ့သီချင်းတွေအမြောက်အများရှိပြီးတော့ နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ “Servent of Evil” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ Vocaloid သီချင်းဖန်တီးသူတွေထဲမှာ နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Akuno-P ဖန်တီးထားတဲ့ Daughter of Evil series ထဲက ဒုတိယမြောက်သီချင်းဖြစ်ပါတယ်၊၊
အမွှာနှစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ Story လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြနေဟန်ရေးဖွဲ့ထားပြီးတော့ သံစဥ်တွေရောစာသားတွေကပါ Fan တွေရဲ့ရင်ထဲကိုထိမိခဲ့တဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်ရင်းငိုခဲ့တဲ့သူတွေရှိခဲ့လို့ တကယ့်ကိုအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ Daughter of Evil က Light Novel အနေနဲ့လည်းထွက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်း Fan book လည်းထွက်ခဲ့ပြီးအုပ်ရေ ၈သိန်းကျော်အထိ ရောင်းချခဲ့ရပါသေးတယ်။
Servent of Evil အပြင် Rin နဲ့ Lenရဲ့ အခြားနာမည်ကြီးသီချင်းလေးတွေရဲ့ Youtube Link လေးတွေထည့်ပေးထားတာမို့လို့ဝမ်းနည်းဖွယ် Story type သီချင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ကြပါဦးနော်။
(Servent of Evil)
(Butterfly on your right shoulder)
Megurine Luka CV03
Luka ဟာCryton Future Media ရဲ့ Vocaloid second generation ရဲ့နောက်ဆုံး Character ဖြစ်ပါတယ်။
Lukaကို 2009 ခုနှစ် January လ 30 ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ သူမကEnglishအသံရောJapanအသံထွက်ပါတတ်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံး Vocaloid Character ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Lukaရဲ့ code name ကတော့ CV03 ဖြစ်ပြီး Character Series 03ဖြစ်ပါတယ်။
စတင်ထွက်ရှိတဲ့အချိန်တုန်းက Hatsune Miku ရဲ့ Cute Style နဲ့လုံးဝမတူညီတဲ့သူမရဲ့ Character Style ကြောင့် Vocaloid Fan တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုခံရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ Miku နဲ့တွဲဖက်တင်ဆက်ရင် အရမ်းလိုက်ဖက်တယ်လို့ ထင်မြင်ချက်တွေပေးလာကြပါတယ်။
Lukaရဲ့ Just be Friend ဆိုတဲ့သီချင်းကို July 2009 မှာ Produce လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရမ်းအောင်မြင်တဲ့သီချင်းဖြစ်တဲ့အပြင် Megurine Luka ဟာအခြား 2nd generation ရဲ့ Miku,Len,Rin တို့နဲ့အတူ Vocaloid Fan တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
Luka ရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းလေးတွေကိုလည်း youtube link လေးတွေနဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်။
(World’s End Dance Hall )
Cryton Future Media Company ရဲ့ Vocaloid3series ထဲမှာအအောင်မြင်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကတော့ Kaito ဖြစ်ပါတယ်။ Vocaloid3ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Japanese နဲ့ English အသံထွက်နိုင်တဲ့ Character တွေသာမက Spanish ,Korean ,နဲ့ Chinese Vocaloid Line Up တွေပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Vocaloid3ရဲ့အခြားလူသိများတဲ့ Vocaloid တွေကတော့ Kaito အပါအဝင် Gumi, Meiko, IA, SeeU တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Kaito ကို Vocaloid 2လို့ထင်ကြနေသူတွေလည်းများပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Kaito က နာမည်ကြီး Game company ဖြစ်တဲ့ SEGA နဲ့ Cryton Future Media ရဲ့ Corporation တစ်ခုဖြစ်တဲ့Hatsune Miku Project DIVA game series မှာ Miku ,Rin ,Len ,Luka,Meiko(V3) တို့နှင့်အတူတကွပါဝင်ထားတဲ့အတွက် ဒီလိုထင်မှားနေကြတာပါ။
Hatsune Miku Project DIVA game series က SEGA မှာအရင်ထုတ်နေကြ rhythm game, Osu Game တွေကိုပုံစံကို Vocaloid နာမည်ကြီးသီချင်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ Game Project ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါGameကို PSP, PS3, PS4, PSV, Nintendo 3DS အစရှိတဲ့ Game စက်အစုံအလင်မှာ ကစားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Project DIVA မှာ SEGA ရဲ့ Animation တွေကအလွန်ကောင်းမွန်တာကြောင့် Vocaloid Fan တွေလည်းအရမ်းနှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Youtube link ထဲမှာသီချင်းကောင်းလေးတွေဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Japan နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Rock Band ဖြစ်တဲ့ Bumb of Chicken, Electro band ဖြစ်တဲ့ Livetune, Japanese Pop Band ဖြစ်တဲ့ Supercell အစရှိတဲ့ Band တွေကလည်း Vocaloid တွေ Featuring အနေနဲ့ ပါဝင်တဲ့သီချင်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့ပါသေးတယ်။
(Ray by Bumb of Chicken)
(Odds and Ends by Supercell)
(Tell your world by Livetune)
Vocaloid လေးတွေနဲ့ collaboration လုပ်တဲ့ရောင်းကုန်မြင့်တင်တဲ့ Company များစွာရှိပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ 2011 ခုနှစ် ကပြုလုပ်သွားတဲ့ Toyota Corolla Campaign ဖြစ်ပါတယ်။
“ Let’s Drive with Miku!” ဆိုတဲ့ Collaboration project တစ်ခုကိုလည်း Honda Car Company နဲ့ Dwangon Company တို့က 2018 November မှာကြေငြာခဲ့ပါသေးတယ်။
သက်ရှိIdolတွေလိုပါပဲ ဒီ Vocaloid Idol လေးတွေလည်း Live Concert ပွဲတွေအမြောက်အမြားရှိပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းနဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ Vocaloid Concert တွေကျင်းပပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကျင်းပဖူးခြင်းမရှိသေးပါဘူး ။
တီးခတ်ပေးနေတာကတကယ့် Band အဖွဲ့ကတီးခတ်နေတာဖြစ်ပြီး အဝေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ့် Idolလေးတစ်ဦးက ကခုန်သီဆိုနေသလိုမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ Video Link ကတစ်ဆင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
(Vocaloid 3rd Live Concert 2010 Tokyo Japan)
(Project DIVA Live Concert)
(Magical Mirai 2016 concert in Makuhari JAPAN)
အခုလက်ရှိအထိ Vocaloid Generation က Vocaloid5အထိရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Vocaloid2ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဘယ် Generation မှမယှဥ်နိုင်ခဲ့တာတော့အမှန်ပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် 2020 Tokyo Olympic ပွဲရဲ့ Opening မှာ Vocaloid Princess Hatsune Miku ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် Fan တွေက စိတ်အားထက်သန်စွာ Vote ပေးလျက်ရှိပြီး၊ 2020 Tokyo Olympic ရဲ့ Official promotion Video မှာလည်း Miku ရဲ့သီချင်းလေးပါဝင်နေတဲ့အတွက် တကယ်ပဲ Miku လေးက Olympic အစီအစဥ်တွေမှာပါဝင်နေမလားဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
[ဂျပန်စာသင်ယူနေသူများ မဖြစ်မနေကြည့်ရန်!] ခန်းဂျိ အခက်စားတွေလေ့လာရအောင်!
ဓာတုဗေဒပညာရပ်ဖြင့် နိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့တဲ့ အခိရ ယိုရှိနို
အိုကီနာဝါကျွန်းရဲ့ကြောက်လန့်စရာ ယူတ နတ်ကွန်း